Andro: 15 Oktobra 2019
Ny indostrian'ny Rail Rail 14-16 dia hatao any Eskisehir amin'ny aprily 2020
Fampandrosoana ny Rail Rail; Ny lanjan'ny lalam-piarenam-paritry ny lalamby sy teknolojia dia hotanterahina ao amin'ny 14-16 aprily 2020 any Eskişehir izay ivon'ny làlan-dalamby sy indostrian'ny lalamby. Ny lanjan'ny stratejika amin'ny fampandrosoana ny firenentsika [More ...]
Lalamby lalamby lalamby any 166 + 900 Ho valin'ny Repoblika Tender momba ny lalamby any Turkey. 2 / 2019 GCC ny sandan'ny fetin'ny serivisy momba ny fividianana isam-paritra (TCDD) dia 455487 TL ary [More ...]
Fanamafisana ny tonelina 1 eo anelanelan'ny Ulukışla sy Yenice Stations
Vokatry ny savoka ho an'ny fanamafisana ny laharan'ny tonelina 1 eo anelanelan'ny tobin'ny Ulukışla sy Yenice, ny Railway State Tiorka Adana. 6 / 2019 GCC fetra 467201 TL ary eo ho eo ny sanda miandraikitra ny faritra (TCDD) [More ...]
IETT nandà ny vaovao fa ny sasany amin'ireo tranonkala amin'ny Internet dia novidina tsy nisy dikany. AnnouncedETT dia nanambara fa nihena ny tender avy amin'ny 175 mankany 140 ary ny 5 dia voavonjy antsasaky ny tapitrisa ao anatin'ny fizarana isan-taona. [More ...]
Nilaza i M. Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa fa manao drafitra ho avy izy ireo mba hampitomboana ny serivisy sy ny fahatongavan'ireo seranam-piaramanidina Istanbul. [More ...]
0312 520 00 00 dia niova ho lozisialy famokarana herinaratra vaovao an'ny tarika TCDD ao Ankara. Tale jeneralin'ny TCDD, ao anatin'ny firafitry ny TCDD, 2. ary 8. (YHT) Mpanolo-tsaina rezionaly any Ankara [More ...]
Ben'ny tanàna Ben'ny tanàna Metropolitan Ordu Nanomboka indray volana i 8 taorian'ny iray volana niaraka tamin'ny ezak'i Mehmet Hilmi Güler. Paragliding dia iray amin'ireo faritra vitsivitsy eran'izao tontolo izao ho an'ny fiara fitaterana fanatanjahantena sy tariby ao anatin'ny fotoana fohy [More ...]
Ny fizotran'ny asfalt amin'ny valan-javaboary 188 dia vita tao anatin'ny faritanin'ny Tetikasa Vona Park Landscaping izay notanterahan'ny Kaominin'i Ordu Metropolitan any Persembe. Miatrika ny tetik'asa asfika sy fambolena [More ...]
Yenikent Yazidere lalana dia lasa lalana konkosa
Eskişehir Metropolitan Monisipaly, Torkia ny notsapaina tamin'ny tanàna maro ary mitohy unabated lalana mahomby nalaina asa mivaingana. Vita izao Cevizli-Bardakçı-Hankaraağaç-Gökçekuyu manarona ny lalana mivaingana 30 kilometatra izao [More ...]
Balıkesir Metropolitan Munisipaly, 3 metatra mijanona eo amin'ny tetezana Dangerous hampiasa ny loza nohavaozina Gömeç. Ny tetezana namboarina indray dia nanomboka ho lalana roa sosona 11 metatra ny haavon'ny 30 metatra. [More ...]
Gebze Darıca Subway dia nafindra tany amin'ny Minisitera fa i Ama
Ny fanamboarana ny lalamby fitodian-tsambo Gebze OSB-Darica dia nafindra tany amin'ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny fotodrafitrasa miaraka amin'ny fanapahan-kevitra nivoaka tao amin'ny gazety ofisialy tamin'ny volana lasa teo. Ilaina ny asa sy ny dingana ilaina amin'ny fananganana ny lalànan'ny lalamby [More ...]
Inona ny zava-misy farany eo amin'ny Tetikasa Tratra Sakarya? ..
Inona no zava-nitranga farany teo amin'ny Tetikasa Tranon'i Sakarya? .. Sakarya Metropolitan'ny Filohan'ny SBB Ekrem Yüce, dia niresaka ny asa natokana hitondrana ny rafitry ny lalamby any an-tanànan'i Sakarya Metropolitan Municipal (SBB) ny filoha Ekrem Yüce, fivondronana Metropolitan [More ...]
Fitateram-bahoaka any Samsun
31 Taorian'ny volana martsa, 25 amin'ny rano sy ny fitomboan'ny 15 ny vidin'ny famakiana, i Samsun Metropolitan Munisipaly dia nanapa-kevitra fa hampiakatra ny saram-pitaterana amin'ity indray mitoraka ity. Araka izany, ny dolmus 3 TL [More ...]
Cooperniversitesi Ground Allocation Cooperation and Training Protocol at Çambaşı Nature Facilities Protokolü dia sonia teo anelanelan'ny Oniversite Ordu sy ny munisipaly Metropolitan Ordu. Facilitiesambaşı Doğa belambaşı Doğa Orbel A.Ş. ary ireo mpiasan'ny oniversite mifandraika amin'izany. [More ...]
Ireo escalator tsy miasa any amin'ny Metro Metro Ankara
Ny fivondronan'i Ankara Metropolitan vao haingana dia nanao fanambarana an-tsoratra mikasika ireo escalator izay tsy mandeha any amin'ny gara Metro. Tao anatin'ny fanambarana nataon'ny Kaomina Metropolitan, ALO 153 Blue Table, indrindra amin'ny alàlan'ny media sosialy [More ...]
Ny BALOSB dia hampivoatra tsy ny Balıkesir ihany fa ny faritra
Zavamaniry nokarakaraina Balıkesir no fijanonana 21 amin'ny fihaonana iraisan'ny saina. Ny fivoriana dia natao tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Turkishtime sy Halkbank ary natsangan'i Şeref Oğuz. Niorina tao 1977, BALOSB dia sampana amin'ny orinasa 110, [More ...]
Nitombo ny fiarovana ny fifamoivoizana ao amin'ny Derao Çenesuyu
Ny kaominin'i Kocaeli Metropolitan dia manohy ny fikojakojana, ny fanamboarana ary ny lalàna mifehy ny lalana takiana. Ny ekipa ao amin'ny departemantan'ny departemantan'ny siansa dia mikendry ny hampihenana ny haben'ny fivezivezena ary hampiakatra ny fiarovana amin'ny distrikan'i Çenesuyu Der Der. [More ...]
Nifindra tany amin'ny toerana vaovao ny biraon'ny fitsangatsanganana gebze Travel
Ny faritry ny serivisy atolotra ho an'ny olom-pirenena nomen'ny Kocaeli Metropolitan Municipality of Munich of Transportation and Management Management dia nitohy. Amin'izany toe-javatra izany, ny serivisy Gebze Travel Cards dia nafindra ho any amin'ny toerany vaovao any Gebze Town Square. FIVORIANA VAOVAO [More ...]
SME Record, 115 Mpikambana an'arivony 848
Union of Munisipaly Marmara sy Kocaeli ben'ny tanàna Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, tontolo iainana madio kokoa, tsy dia misy ny fifamoivoizana miaraka amin'ny teny filamatra mba ho malaza amin'ny asan'ny Kocaeli [More ...]
Izmit Bay fandotoana 10 Ship 10 Million TL sazy!
Kocaeli Metropolitan Munisipalin'ny Departemantan'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ekipa mpanara-maso ny fizahana, dia tsy nanome làlana fandotoana tao Izmit Bay. Ny ekipa 7 miasa andro aman'alina nefa tsy milaza ny famantaranandro 24, hetsika 2019 any 10 [More ...]